ककनीमा पोष्ट बहादुर कृषि प्रर्दशनी मेला -२०७६ सुरु, रानीपौवाको सडक अलपत्र पार्ने ठेकेदारलाई सरकारले कारवाही गर्नुपर्ने प्रचण्डको भनाई « जालपा न्युज Jalapa News
ककनीमा पोष्ट बहादुर कृषि प्रर्दशनी मेला -२०७६ सुरु, रानीपौवाको सडक अलपत्र पार्ने ठेकेदारलाई सरकारले कारवाही गर्नुपर्ने प्रचण्डको भनाई
ककनी, कृषिलाई व्यवसायीकरण र आधुनिकरण गर्ने उदेश्यका साथ नुवाकोटमा पोष्टबहादुर बोगटी स्मृति कृषि प्रदर्शनी मेला २०७६ सुरु भएको छ । पोष्टबहादुर बोगटी स्मृति प्रतिष्ठानले नुवाकोटको ककनीमा आयोजना गरेको कृषि मेलाको उद्घाटन नेकपाका अध्यक्ष तथा पुर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गर्नु भएको हो ।
पुर्व प्रधानमन्त्रि पुष्पकमल दाहालले देशको संवृद्धिको आधार नै कृषि क्षेत्र भएको बताउनु भयो ।
प्रचण्डले व्यवसायिक उत्पादनमार्फत कृषी उत्पादन बढाउन सके युवा पलायन रोक्न सकिने धारणा व्यक्त गर्नु भयो । फरक प्रसङ्गमा प्रचण्डले देशभर ७÷८ जना ठेकेदारले ठेक्का जमाएको भन्दै त्यसको समाधान नगरेसम्म सडक निर्माण समयमै सम्पन्न नहुने समस्या देखिरहने प्रष्ट्याउनु भयो । उनले देश संवृद्धि र विकासतर्फ लम्किनुपर्ने भएपनि त्यो नभएको बताए । जनताको आकांक्षा पुरा गर्न सरकार लागिरहेको उनको भनाइ छ ।
नेकपाका नेता एवम संघिय सांसद हितबहादुर तामाङले प्रचण्डका घरपेटी ठेकेदारका कारण ककनी–रानीपौवा सडक ७ बर्षसम्म अलपत्र परेको भन्दै आक्रोश पोख्नु भएको हो ।
नुवाकोटको ककनी गाउँपालिकाको सदरमुकाम रानीपौवामा भएको कार्यक्रममा सोही क्षेत्रका सांसद समेत रहेका तामाङले काठमाडौँ त्रिशुली सडकको विषय उठान गर्दै काम नगरेको भन्दै ठेकेदारमाथि आक्रोश पोख्नु भएको हो ।
सांसद हितबहादुर तामाङको प्रश्नको जवाफ दिँदै कार्यक्रमका प्रमुख अतिथी एवम पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने काम सरकारको भएको भन्दै ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने काम सरकारले गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो ।
शनिबार प्रचण्डले सरकारले ठेकेदारलाई ठीक ठाउँमा राख्नसक्नुपर्ने उल्लेख गरे । रानीपौवासम्म पुग्दा सडकको दुरावस्था आफैँले समेत महशुष गरेका नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले जुनुसुकै ठेकेदार भए पनि कारबाही गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्नु भयो ।
आफ्नो जोडबलमा खरिद ऐन र ठेक्का प्रणाली सुधार गर्ने योजना सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा परेको नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले दाबी गर्नुभयो । ठेकदारको एकाधिकार नतोडे जनताले देख्ने गरी प्रगति र समृद्धि आउन कठिन रहेको बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पुर्व अर्थमन्त्रि डा. रामशरण महतले विगतमा शुरु गरिएको योजना सम्पन्न गर्नु सरकारको कर्तव्य भएको बताएका हुन् । नेता महतले स्थानिय तहलाई आर्थिक अधिकार संविधानले दिएको भन्दै योजना बनाउँदै सबैको सहभागिता हुनुपर्ने प्रष्ट पारेका हुन् ।
कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभाका सांसद हितबहादुर तामाङले सडक र फोहोरले नुवाकोटको विकासमा बाधा पुराएको भन्दै सरकारले त्यसतर्फ ध्षन दिनुपर्ने भनाइ राख्नु भयो । त्यस्तै प्रतिनिधि सभाका सांसद नारायणप्रसाद खतिवडाले समग्र कृषी क्षेत्रमा उत्प्रेरणा दिन मेला आयोजना गरेको बताउनुभयो ।
सो कृषि मेला जेठ चार गते देखि जेठ ८ गते सम्म चल्ने छ । मेलामा स्थानीय कृषि उत्पादन, कृषि सामाग्री र कृषि परामर्श केन्द्रका ४० स्टलहरु राखिएको छ । ४० हजारले अवलोकन गर्ने लक्ष्य रहेको मेलामा ६० लाख अम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ । मेलामा २ सय ५६ जना उत्कृष्ट कृषकको छनोट गरि पुरस्कृत गरिने आयोजकले जानकारी दिएको छ ।
कार्यक्रम ख्याती प्राप्त कलाकार बद्री पंगनी लगायतका कलाकारहरुको बजोड प्रस्तुती थियो .
भने स्थानीय झाँकी प्रदर्शन गरिएको थियो ।